Thu, Apr 26, 2018 | 21:17:46 NST
राजेन्द्रको द्रौपदी सार्बजनिक
काठमाडौ, भदौ २१ – राजेन्द्र थापाको नयाँ उपन्यास द्रौपदी शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । घरेलु हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाको कथामा आधारित उपन्यास अभिनेत्री रेखा थापाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
जिन्दगीको भोगाइ हरिवंशको साथमा (फोटो र भिडियो)
काठमाडौं, भदौ २० – घरभित्र बालबालिकाहरु कति सुरक्षित छन् ? बालमैत्री छ कि छैन ? यस्तै विषयमा पीडित र कलाकार हरिवंश आचार्यबीचको कुराकानी हेर्न पाइने भएको छ ।
किन बिक्न छाड्यो नेपालमा स्टारडम ?
मदन खनाल/उज्यालो, काठमाडौ, भदौ १९ – कुनै समय थियो राजेश हमालको टाउको पोष्टरमा देखेकै भरमा दर्शक हलसम्म जान्थे । भुवन केसीको मुस्कानले चलचित्रमा आकर्षण थप्थ्यो । शिव श्रेष्ठको रिसाहा अनुहार हेर्न भिड लाग्थ्यो ।
८१ वर्षकी हजुरआमाका तीजका गीत
काठमाडौं, भदौ १९ - पोखरा ७ मासबारकी ८१ वर्षकी बदसरा पराजुलीले यसवर्ष पनि तीजको गीत बजारमा ल्याउनुभएको छ ।
पाकिस्तानमा भेटिए ‘डुब्लिकेट’ सलमान खान (भिडियोसहित)
भदौ १८ – नेपाली सिने क्षेत्रमा शितल केसीको प्रवेशले जसरी तहल्का मच्चाएको थियो, अहिले बलिउडमा पनि त्यस्तै तहल्का मच्चिएको छ ।
पञ्चदानको रौनक (फोटोफिचर)
लक्ष्मी शाक्य/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १८ – आज काठमाडौं, भक्तपुर, किर्तीपुर, साँखु, ठिमी, बनेपा, पनौतिलगायतका ठाउँमा बौद्ध धर्मावलम्वी नेवारहरुले पँजरा अर्थात पञ्चदान पर्व मनाइँदै छ ।
भक्तपुरमा तीजको रौनक
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, भदौ १७ - नेपाली हिन्दू महिलाहरूको ठूलो चाड तीज सुरु हुन एकसाता बाँकी रहँदा भक्तपुरमा भने तीजको रौनकले छपक्कै ढाकेको छ । तीजको रौनक सुरु भएपछि तीज कार्यक्रम राखेर नाचगान तथा दर खान सुरु गरेका छन् ।
युएईमा तिज कार्यक्रमको रौनक
दुबई– युएईमा रहेका नेपालीहरुले नजिकिएको पर्व तिज नेपाली परम्परा अनुसार बिभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाएका छन् । कार्यक्रममा पारम्पारिक पहिरन रातो साडी र छड्के तिलहरी लगाएर महिलाहरु छमछमी नाचे ।
पलेँटीले फर्कायो जवानी (तस्बिरसहित)
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १७ - सात वर्षअघि नेपालयले स्टेज कार्यक्रममा निम्तो दिँदा गायक प्रेमध्वज प्रधानले अस्वीकार गर्नुभयो । कारण थियो, दर्शक अघिल्तिर बसेर लामो समय गीत गाउन सकिएला, नसकिएला भन्ने आशंका ।
इराकमा मारिएका नेपालीको नाममा चलचित्र (तस्बिर र प्रोमो सहित)
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १६ – माया पिरतीका धेरै गीत गाएका गायक शिव परियारले चलचित्र ‘१२ नेपाली एक चिहान’मा रहेको गीत गाउँदा आफू पनि भावविहृल भएको सुनाए ।
तीजको गीत की रत्यौली ?
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । ‘...बाल मतलब भएन, बबाल मच्चाउँछु तीजमा बबाल मच्चाईन्छ.....’ ‘....म त मान्छे बिन्दास चाहिँदैन कसैको दिलभित्र बास....’ ‘...जब म उसलाई फेसबुकमा देख्छु हेलो हाई, के छ भनेर लेख्छु मेरो काले अनलाइनमा आको छ....’
‘वनका चरी’ स्टेजमा गुञ्जिदा...(फोटो फिचर)
काठमाडौं, भदौ १६ – शनिबार साँझ दशरथ रंगशालामा गोलले हुटिङ थपिरहँदा ललितपुर डिएभी कलेजमा पनि उसैगरी ताली र हुटिङ गुञ्जियो । रंगशालाको गोलले होइन, दावा ग्याल्मो र डेजी बराइलीको गायनले ।
कथा: कुमारी आमाको बयान
सूर्यकुमार क्षेत्री – सखारै पँधेरामा गाईंगुईं हल्ला चल्यो । मुख फोरेर कसैले बोलेनन् । कोही कानेखुशी त कोही आँखाको इशाराले कुरा गर्न थाले । माथ्लाघरे साईंली पड्कँदै रित्तो गाग्री हातमा लिएर पँधेरामा आइन् ।
‘मुस्कान पासाको नाति’ पनि कवि !
काठमाडौ, भदौ १५ – हाँस्य टेलिश्रृँखला ‘मेरी बास्सै’ मा ‘मुस्कान पासाको नाति’ भएर खेल्ने ‘फसीलाल’ अर्थात कुमार श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा चर्चित छन् । उनले त्यहाँ खेलेको भूमिकालाई धेरै दर्शकले मन पनि पराएका छन् ।
पौभाः चित्रमा नेपाल खाल्डोको नक्सा
राजेन्द्र शाक्य/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १५ - वास्तुकलाको एक अद्‍भूत नमूना, बौद्ध आस्थाका एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल, अनि पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र - काठमाडौंको स्वयम्भू चैत्य ।
९५ वर्षिय राष्ट्रकवि जोशिएको साँझ (फोटो फिचर)
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ १५ – कसैकसैलाई दुई मिनेटसम्म पलेँटी कसेर बस्दा समेत पट्यार लाग्छ, खुट्टा झमझमाउँछ, चल्न चटपटाउन मन लाग्छ । तर ९५ वर्ष उमेर पुग्न लागेका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे दुईघण्टा बढी समय पलेँटी कसेर मात्र बस्नुभएन ।
९४ वर्षिय राष्ट्रकवि पलँटीमा जोसिंदै
काठमाडौं, भदौ १४ – राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे शुक्रबार साँझ पलेँटीमा जोसिंदै हुनुहुन्छ । नेपालयले आयोजना गरेको पलेँटी उत्सवमा घिमिरेले रचना गरेका गीत र उहाँको सम्झनालाई दर्शकले प्रत्यक्ष सुन्न पाउने भएका हुन् ।
‘फतौरी बुढी’ एयरहोस्टेज !
काठमाडौ, भदौ १३ –एयर होस्टेज भन्ने बित्तिकै सबैले चिटिक्क कपडा लगाएका आकर्षक युवती सम्झन्छन् । दाँत झरेका र कुप्रो परिसकेका महिलालाई एयर होस्टेजको रुपमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर मेरी बास्सैकी ‘फतौरी बुढी’ एयर होस्टेज भएकी छिन् ।
९४ वर्षिय राष्ट्रकवि पलेँटीमा
काठमाडौं, भदौ १२ - उमेरले सय छुन लागिसक्दा पनि सृजनामा अझै सकृय राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई यसपटक छुट्टै रुपमा हेर्न पाइने भएको छ । पलेँटी उत्सवमा घिमिरेले रचना गरेका गीत र उहाँको सम्झनालाई दर्शकले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनेछन् ।
फोटो पत्रकार चित्रकार साँच्चिकै चित्रकार (फोटो फिचर)
विनोद ढकाल/उज्यालो, काठमाडौ, भदौ ११ – फोटो पत्रकार गोपाल चित्रकार साँच्चिकै चित्रकार पनि हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
बाँच्नका लागि के मात्रै गरिएन : तुलसी घिमिरे
चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई नचिन्ने कमै होलान् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन उहाँले ठूलो योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । तर उहाँ आफैँलाई यहाँसम्म आइपुग्न चाहिँ निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।
धुर्मुस र माग्नेबुढा सँगै, मेरी बास्सैका अरु चारतिर
काठमाडौं, भदौ ९ – पोहोर छुट्टाछुट्टै रुपमा गाईजात्रे कार्यक्रममा सहभागी भएका सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ यसपटक सँगै छन् ।